प्याजलाई यो तरिकाबाट सेवन गर्नुहोस यस्ता छन् फाइदा
प्रकासित मिति : ४ भाद्र २०७५, सोमबार प्रकासित समय : १३:०८
एजेन्सी: प्याजको सेवन गर्न तपाई कति रुचाउनु हुन्छ ? वा सेवनमा धेरै भएको त छैन् ? वा त्यसको बास्ना मन पर्दैन ? वा सेवन गर्न उचित मान्नु हुन्न ? तर प्याजका धेरै उपयुक्तता मध्य एक हो यौन क्षेत्रमा बृद्धि ।
प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा खाना नरुच्ने जस्ता समस्याको समाधानमा पनि कामयावी हुन्छ ।
आहार विशेषज्ञ तथा यौन रोग विशेषज्ञहरुका अनुसार प्याजको सेवनले खानामा रुची त बढाउँछ नै साथै यसले यौनिक कमजोरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ ।
शुखी तथा सन्तुष्ट वैवाहिक जिवनका लागि शंम्भोग शक्ति प्रवल हुन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि प्याज एक अचूक उपाय बन्न सक्ने बताइएको छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यौन शक्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्याज एक सस्तो तथा सुलभ विकल्प हो ।
सेता प्याजको रस, अदुवाको रस, शुद्ध मह र घिउ ५–५ ग्राम मिलाएर हरेक बिहान सेवन गर्नुहोस् । एक महिनासम्मको नियमित सेवनले तपाइँमा यौन क्षमता वृद्धि भएको पाउनुहुनेछ ।
रातो प्याजको रस र घिउ दुधमा मिसाएर दिनहुँ खाने गर्नुहोस् । शिघ्रपतनको समस्या भएका हरुका लागि प्याजको प्रयोग निकै लाभदायी हुन्छ ।प्याजको रसमा सम्फोको रस मिलाउनुहोस् अनि त्यसमा घिउ र चिनी समेत मिलाएर नियमित सेवन गर्नुहोस् ।
मासको दालको पिठो बनाएर त्यसमा प्याजको रसले मोल्नुहोस् र त्यसलाई दूधमा पकाएर नियमित सेवन गर्नुहोस् । यसले तपाइँको यौन क्षमतामा वृद्धि गर्ने एक अध्ययन ले देखाएको छ ।
महिलाको भन्दा पुरुषमा यौन शक्ती कमजोर हुने र छिटै सिथिल हुने भएकाले पनि पुरुषले विभिन्न औषधीहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल देशकै उत्कृष्ट
काठमाडौं । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल देशभरकै उत्कृष्टमा छनोट भएको छ ।न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा